Koonfur AFrica | March 2, 2003
AASAASKII JABHADDII XOREYNTA S/GALBEED (WSLF)
Bishii jannaayo sannadkii 1976kii waxaa tuulada Yaaqbadhiweyn ee Afgooye ka xigta dhinaca wallaweyn ee koonfurta soomaaliya lagu qabtay shirweyne lagu aasaasay Jabhaddii xoreynta soomaali galbeed (WSLF), laguna dhisay gole dhexe oo ka kooban 25 xubnood xoghaye guudna uu u yahay C/Laahi Xasan Maxmuud wuxuu hoggaankii jabhaddu markiiba ku dhaqaaqay in uu howl galiyo naftood hurayaashii soomaali galbeed. Ciidanka jabhadda oo qabay cadho gaaxsan oo ku aaddan maamulayaasha itoobiya waxay howlgallo dagaal ka billaabeen gudaha dalka ogaadeenya iyagoo dagaalladii ay la galeen cadowga kasoo hoyiyey guulo la taaban karo, waxayna gacanta ku dhigeen inta badan dhulkoodii.
Dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo isticmaaleysa siyaasad ay ugu magacdartay taakuleyn ayaa galisay gudaha ogaadeeniya cutubyo ka tirsan ciidamadeeda qalabka sida sannadkii 1978kii, arrintaasoo dhabarjab ku noqotay guulihii ay gaadheen xaq u dirirkii soomaali galbeed, mugdina galisay wajiga qaddiyadda ee fagaarayasha caalimiga ah, miisaankii dagaalkana u baddashay su’aal xuduudeed oo ka dhaxaysa soomaaliya iyo itoobiya. Dhanka kale waxay faragalintaasi lumisay qaabkii maamul ee hoggaankii jabhaddii xoreynta soomaali galbeed (WSLF) oo u muuqday inuu yahay daawade sharaf leh.
Bishii Noofeembar sannadkii 1978kii ururrada bulshada soomaali galbeed shir ay codsadeen ayaa lagu go’aamiyey in wax laga baddalo tirada iyo tayada xubnaha golaha dhexe ee jabhadda xoreynta soomaali galbeed oo ay ku jiraan dad badan oo loo arkayey in ayna u qalmin masuuliyaddooda marka la fiiriyo heerkooda aqooneed iyo maamul taasoo cod buuxa lagu taageeray waxaana la kordhiyey tirada xubnaha golaha dhexe oo la gaadhsiiyey ilaa iyo 150 xubnood, wuxuuna hogaankaas cusub majaraha u qabtay halgan jaha wareersan oo uu hoos u dhigay kasoo bixiddii soomaaliya ee isla sannadkii 1978kii ay kasoo baxday dalka ogaadeeniya ee aan qaabeysneyn iyo mooralkii itoobiya ee ay badhi gantaalyeen bahda reer bariga ee ay hormuudka u ahaayeen quwaddii midowgii soofiyeetiga, kuuba iyo qaar ka mid ah waddamada carabta ee xulafada la ahaa gaar ahaan Yementii koonfureed iyo Liibiya kaas oo jiitamayey muddo sannado ah.
Sannadkii 1981kii waxaa la qabtay shirweyne kaddib markii ay sidaasi codsadeen shacabka dalka gudihiisa iyo ciidanka jabhadda oo uu ku dhacayey culeyska halganka. Haddaba guddigii qabanqaabada oo loo xil saaray in ay diraariyaan shirweynaha, meesha uu ka dhacayo iyo xeer nidaamiyaha shirka waxay u yeedheen qaybaha kala duwan ee bulshada sida aqoonyahanka, salaadiinta, culaa u diinka, ururka haweenka, ururka dhallinyarada iyo qaybo ka tirsanaa ciidankii xoreynta. Waxaa shirkaas lagu doortay gole dhexe oo ka kooban 51 xubnood oo uu ku jiro xoghaye guud oo loo doortay Maxamed Diiriye Cabdi (Uur-doox), waxaana la dajiyey xeer qaanuun ahaan, nidaam ahaan iyo halgan ahaanba qeexaya in ay jabhaddu tahay hay’ad siyaasadeed oo matasha shacab leh dhul iyo magac la ogyahay. Hoggaankii Uur-doox ma noqonin mid cimri dheeraada kaddib makii ay isaga iyo dowladdii soomaaliya isku khilaafeen aragtida siyaasadeed ee ku aaddan soomaali galbeed, waxaana laga codsaday in uu xilka wareejiyo. Inkastoo ay jireen dad badan oo kasoo horjeeday ama diiddanaa fikirka is casilidda haddana bishii Luuliyo ee sannadkii 1982kii ayuu xilkii dhiibay Maxamed Diiriye Uur-doox oo dhowr jeer oo hore xukuumadda soomaaliya ay u xidhay aragtida hadda masuuliyadda looga wareejiyey mid la mid ah.
Bishii Agoosto ee isla sannadkaas 1982kii waxaa si ku meel gaadh ah loo doortay Sh.C/Naasir Sh.Aadan-yare oo ka mid ahaa halgamayaashii ku caan baxay qaddiyadda guddoomiye ku xogeenna ka ahaa maamulkii ka horreeyey kan Uur-doox. Hoggaankii uu madaxda ka ahaa Sh.C/Naasir oo xog ogaal u ahaa aragtida meesha ka saartay ninkii uu baddalay ma uusan awoodin in uu ku tallaabsado isbaddal keeni karay isku dhac dhex mara isaga iyo wasaaradaha gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee Jamhuuraddii Dimoqraadiaga ee Soomaaliya kuwaasoo si toos ah looga maamuli jiray arrimaha jabhadda, waxayna arrintaasi sababtay iska hor imaad xoog leh oo ka dhex dhacay ururradii bulshada iyo hoggankii jabhaddii xoreynta soomaali galbeed.